Hello Nepal News » अरूका यी ६ सामान, जुन भुलेर पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन
अरूका यी ६ सामान, जुन भुलेर पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन
यो विश्वास गरिन्छ कि, हरेक मानिससँग आफ्नो विशेष शक्ति हुन्छ । यस्तो शक्तिले हामीले गरेका सामान वा वस्तुलाई पनि प्रभावित पार्छ । यदि कसैले सामान आफ्नो साथमा राख्छ वा प्रयोग गर्छ भने उसको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कुरा ऊसँग जाने विश्वास गरिन्छ ।
विभिन्न स्थापित मान्यताअनुसार त्यसरी अरूले प्रयोग गरेका चिज प्रयोग गर्दा आफ्ना लागि दुर्भाग्य र आर्थिक क्षतिको कारण पनि बन्न सक्छ । त्यसैले सकेसम्म हामीले अरूको सामान वा वस्तु प्रयोग गर्नुअघि सोच्नु राम्रो हुन्छ । यहाँ केही त्यस्ता चिजबारे कुरा गरिएको छ ।
१. हामीकहाँ स्थापित एक मान्यता यो छ कि, हामीले दोस्रो व्यक्तिको रुमाल कहिल्यै प्रयोग गर्नुहुँदैन । रुमाललाई दुई व्यक्तिबीचको तनाव वा झगडाको बीउका रूपमा लिइन्छ । अन्य मानिसकोे रुमाल प्रयोग गर्दा लगातार आर्थिक क्षति हुन सक्छ । अथवा, पैसाको घाटा बढ्छ ।
२. कसैको धन वा सामान सापटी लिएपछि फिर्ता नदिनु पनि राम्रो होयन । त्यस्ता मानिसका लागि त्यो आर्थिक समस्याको कारण बन्छ । त्यसैले अरूका सामान वा धन सापटी भनेर लिनुभएको छ भने त्यसलाई कहिल्यै बाँकी राख्नु हुँदैन । वा, आफैंसँग राख्नु हुँदैन ।
३. कोही नयाँ मान्छेको ओछ्यानमा सुत्नु पनि वास्तुशास्त्रअनुसार दोषपूर्ण मानिन्छ । यस्तो गर्दा सुत्ने व्यक्तिसँग सधैं झगडाको कारण बन्न सक्छ । वा, झगडा बढ्ने बताइन्छ ।
४. हातमा लगाइने घडीले व्यक्तिमा राम्रो अथवा नराम्रो शक्तिलाई असर पार्ने कुरा शास्त्रमै उल्लेख छ । अरूको घडी लगाए काममा असफलता बढ्नुका साथै पैसाको क्षति बढ्न थाल्छ ।
५. त्यसैगरी, अर्काको कपडा प्रयोग गर्नुलाई पनि राम्रो मानिँदैन । अर्काको कपडा लगाउँदा वा प्रयोग गर्दा एक व्यक्तिको दुःख अर्कोलाई सर्ने विश्वास गरिन्छ । त्यसैले अरूको कपडा मागेर वा साटेर सकेसम्म लगाउनु हुँदैन ।
६. अर्को रोचक कुरा यो छ कि, कसैको कलम–पेन सापट लिएर फिर्ता दिन भुल्नु राम्रो होइन । यो आर्थिक समस्याको कारण बन्ने विश्वास छ । दोस्रो व्यक्तिको कलम जाने वा भुलेर आफूसँग कहिल्यै नराख्नु भन्ने भनाइ नेपालमा समाजमा स्थापित छ ।
प्रकाशित मिति १४ भाद्र २०७७, आईतवार ०४:३२
नयाँ सिजनको पहिलो खेलमा रियल मड्रिडको निराशाजनक बराबरी
नयाँ सिजनको पहिलो खेलमा युभेन्टसको शानदार जित